उत्तर अमेरिकामा विज्ञतामा पनि विविधता छ– जोशी - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७५-०२-५ बिचार / प्रतिक्रिया
गौरीराज जोशी ।
गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आयोजना तथा गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको व्यवस्थापनमा क्यालिफोर्नियाको सानफ्रान्सिस्कोमा आउदो जुन महिनाको १६ र १७ मा विज्ञ सम्मेलन हुदैंछ । उक्त उत्तर अमेरिका क्षेत्रीय विज्ञ सम्मेलनको आयोजना, उद्देश्य, तयारी र त्यसवाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धीमा केन्द्रीत रहेर गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्, उत्तर अमेरिकाका क्षेत्रीय संयोजक गौरी राज जोशीसग विश्व न्यूजका लागि सुरज भण्डारी बीच भएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।
यो सम्मेलन आयोजनाको उद्देश्य माथि प्रकाश पारी दिनुहोस् न ?
आइसिसीको (गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्) कार्यक्रम अन्तर्गत उत्तर अमेरिका क्षेत्रीय स्तरको विज्ञ सम्मेलन हुन लागेको हो । खासगरी गएको ग्लोवल कन्फ्रेन्समैं पनि एनआरएनए व्यवसायीको मात्र संस्था बन्न थाल्यो । व्यवसाय गर्नेहरु मात्रैं एनआरएनएमा लाग्न थाले भन्ने खालको वहस त्यो कन्फ्रेन्समा चलेको थियो । एनआरएनए भनेको धनीको क्लबको हो भन्ने सम्मका कुराहरु नभएका होइनन् । यो सबैंका बीच आइसिसीले प्रवासमा रहनुहुने विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुको विज्ञता र अनुभवलाई एनआरएनएको मुभमेन्टमा जोड्दैं नेपाल सरकारसग मिलेर काम गर्ने सोंच र सोही अनुरुपको कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । त्यसैं क्रममा आइसिसीको विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरको विज्ञ भेला गरी अन्तिममा विश्व विज्ञ भेला गर्ने कार्यक्रम अनुरुप उत्तर अमेरिका क्षेत्रमा यो कार्यक्रम हुन लागेको हो ।
भेलाको तयारी कस्तो भैरहेको छ ?
यो खासगरी विभिन्न क्षेत्र तथा पेशामा कार्यरतहरुको अनुभव र विज्ञतालाई एक ठाउमा राखेर गरिने गहन छलफल हो । उत्तर अमेरिकामा प्राज्ञिक क्षेत्र देखि लिएर विभिन्न खालका क्षेत्रहरुमा रहनुहुनेहरुलाई हामीले एउटैं मञ्चमा उभ्याउने प्रयास गरेका छौं । भौतिक रुपमा मात्रैं नभई लिखित प्रतिवेदनका रुपमा समेत उहाहरुको भेलामा उपस्थिति रहन्छ । हामीले भेलालाई उद्देश्य अनुरुप लैजान विज्ञ कमिटि बनाएका छौं । त्यही कमिटिले उद्देश्यमा हेर विज्ञहरुलाई सम्पर्क गर्ने देखि लिएर अन्य कामहरु पनि गरिरहेको छ । खासगरी एनआरएनएले नेपाल सरकारसग मिलेर काम गरिरहदा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेका योजना र कृषि, सुचना प्रविधि, पर्यटन, शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरुमा यहाको अनुभव, विज्ञता र योग्यतालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा भेला केन्द्रीत रहन्छ । देश विकास र समृद्दिको यात्रामा अघि बढिरहदा पक्कैंपनि डायस्पोरामा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल अनुभवी, योग्य व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाहरुको त्यही अनुभव बाड्न सक्दा मात्रैं पनि त्यसले महत्व राख्छ भन्ने कुरा हो । यहा विज्ञतामा विविधता छ । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम भैरहेको छ ।
उसो भए नेपालको विकास र सम्वृद्दिको यात्रामा लगानी बढाउन पनि यो भेला फलदायी हुन्छ त ?
लगानी भन्दा पैसाकै कुरा आउन सक्छ । पैसाको लगानी मात्रैं पनि होइन । यो वेला पैसा सगैं सोंच, अनुभव , विज्ञता र योग्यताको लगानीको पनि अर्थ रहन्छ । नेपालको विकास र सम्वृद्दिको यात्रामा यहाको वौद्धिकतालाई उपयोग गर्न सक्दा पनि त्यसले महत्वपूर्ण परिणाम दिन सक्छ । अहिलेको भेला खासगरी जो यहा हुनुहुन्छ उहाहरुको बौद्दिक सम्पक्तिलाई संगठित गर्दै एनआरएनए मार्फत नेपाल सरकारसग पुर्याउने हो । त्यसका लागि भेला फलदायी हुने विश्वास रहेको छ ।
सम्पर्क गरिराख्दा उत्तर अमेरिका क्षेत्रमा त विज्ञतामा विविधता भेट्नुभयो होला नि ?
हो यहा धेरैं क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्नुभएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि लिएर अन्य क्षेत्रहरुमा पनि नेपालीहरु संलग्न हुनुहुन्छ । यहाको ठूला ठूला कर्पोरेट क्षेत्रमा समेत नेपाली आवद्ध हुनुहुन्छ । डाक्टर इन्जिनियर, भौतिकशास्त्रीहरु, अर्थशास्त्रीहरु नेपालीहरुसग सम्पर्क भैरहेको छ । पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण आयोजनामा इन्जिनियरको रुपमा काम गरिसक्नुभएका र गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरु यहा हुनुहुन्छ । यतिमात्र होइन प्राज्ञिक क्षेत्र बाहिर पनि धेरैं नया खालका योजनाहरुमा संलग्न व्यक्तिहरु पनि यहा हुनुहुन्छ यसरी हेर्दा यहा साच्चिकैं विज्ञतामा विविधता छ जसलाई हामीले एउटैं मञ्चमा जोड्न खोजिरहेका छौं ।
भेलासगैं अर्को प्रसंग उत्तर अमेरिका क्षेत्र भनेपनि हामी अमेरिका र क्यानडामैं केन्द्रीत भैराखेका छौं किन ?
यहा तुलनात्मक रुपमा नेपालीको वसोवास बढी रहेको छ । तर पनि हामीले अन्य देशमा वस्नुहुने नेपालीलाई जोड्न खोजिरहेका छौं । अहिले विशेषत बा्रजिल र चिली यस प्रक्रियामा समाहित भैसकेको अवस्था छ । अन्य देशमा नेपालीको बसोबास के कस्तो छ तथ्यांक निकाल्दैं छौं सम्पर्क गरिराखेका छौं । हामी एनआरएनएको मुभमेन्टमा ती देशमा वस्ने नेपालीहरुलाई जोड्ने प्रक्रियामा लाग्छौं ।
नेपाल सरकारसगको सहकार्य के रहेको छ ?
यो नेपाल सरकारलाई नैं फाइदा पुगोस् भनेर गरिएको कार्यक्रम हो । आइसिसीले नेपाल सरकारसग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा क्षेत्रमा प्रवासी नेपालीको योगदान के कस्तो रहन सक्छ त्यसमा आइसिसी लागिरहेको छ । यो भेला पनि ती विज्ञहरुको जमघट हुने थलो भएकाले यसमा नेपाल सरकारलाई फाइदा पुग्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । नेपाल सरकारले समेत यसलाई महत्व दिएको छ । नेपालका सरकार पर्यटनमन्त्री आउने पक्का भैसकेको छ । योजना आयोगका सदस्य, पूर्व सदस्यहरु पनि आउनुहुन्छ, नेपालमा योजना विद्, अर्थशास्त्रीहरु पनि आउने तयारी छ, यसरी हेर्दा यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहयोगी कार्यक्रम जस्तो पनि हो भन्दा हुन्छ ।
यो भेला पछिको निच्योडले के गर्छ ?
यो भेला सकिएपछि अक्टुवरमा फेरि ग्लोवल भेला हुदैंछ । यहा आएका विचारहरु माथि त्यहा पनि अझ गहन छलफल हुनेछ । अहिलेको यो भेलाको निचोडलाई ग्लोवल भेलामा राख्दैं नेपाल सरकारसग पुर्याउने आइसिसीको योजना रहेको छ ।
यो भेलामा कसरी सहभागिता जनाउन सकिन्छ ?
मैले अघि पनि भने खाली प्राज्ञिक क्षेत्रको मात्रैं कुरा होइन । तपाई केही नया सोंच, तपाईसग केही यस्तो अनुभव छ, तपाई सग यस्तो क्षमता छ जुन क्षमता तपाईले नेपालको विकास र सम्वृद्दिमा लगाउन चाहनुहुन्छ त्यसका लागि यो एउटा फोरम हो । यो भेलामा तपाइ सबैंले आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुन्छ, लिखित प्रतिवेदन मार्फत पनि दिन सक्नुहुन्छ । यो संस्थामा सवैं प्रवासी नेपालीको उत्तिकैं जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । यो संस्थालाई राम्रो बनाउने भूमिका पनि सबैंको छ । त्यसैंले म सबैंमा अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भेलामा आएर एनआरएनएको मुभमेन्टमा सहभागि बन्नुहोस् ।
अन्त्यमा कता कता यो भेलामा पनि चुनावको पूवअभ्यास देखिनेछ पनि भनिन्छ नि ?
इलेक्सन भन्ने कुरा टु अर्लि । अहिले हामीहरु कसैंले त्यो सोचेका छैनौं । यदि कोही व्यत्तिको मानसिकता त्यस्तो हुन सक्ला तर अहिले हाम्रो ध्यान भनेको यहाको एक्सपर्टिचलाई कसरी नेपालको दिर्घकालिन विकास सग जोड्न सकिन्छ भन्नेमा रहेको छ । कसरी यो भेलालाई परिणाममुखी बनाउने भन्ने तयारी हाम्रो रहेको छ ।